Fitsipika miasa amin'ny flamethrower
Amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny tsindry sy ny fanovana ny onja dia esorina amin'ny vavon'ny basy ny entona ary dorana mba hananganana lelafo mandritry ny hafanana avo lenta ho an'ny fanafanana sy ny fantsona. Raha ny firafitra dia misy karazany roa ny flamethrowers tanan-tanana, ny iray dia ny palma vita amin'ny rivotra sy rofia ambony ...Hamaky bebe kokoa »
Fomba fiasa fiarovana amin'ny lance gazy liquefied
1. Fanaraha-maso: ampifandraiso ny faritra rehetra amin'ny basy spray, hamafiso ny fametahana fantson-tsolika, (na hamafiso amin'ny tariby vy), ampifandraiso ny mpampifandray gazy mihidy, akatony ny jiro basy, alefaso ny valan'ny varingarina misy gazy liquefied, ary zahao raha misy dia famoahana rivotra isaky ny faritra. 2. Ignition: relea kely ...Hamaky bebe kokoa »
Ny fitsipiky ny flamethrower
Ny flamethrower dia karazan'entana ivelany vaovao, izay an'ny fitaovana fandrahoan-tsaha. "Torch" no iantsoana azy any amin'ny firenena vahiny. Izy io dia karazana fitaovana fanamafisana ny afo izay azo avy amin'ny fitoeran-tsolika misy butana. Ireo fitaovana fandrahoana sakafo an-tsaha amin'ny ankapobeny dia manondro ny lohan'ny lafaoro sy ny f ...Hamaky bebe kokoa »
Amin'ny andro voalohany amin'ny 2020, mpiasa Kalilong 100 no mivory hisakafo hariva. Mandritra ny sakafo hariva dia mikasa ny hanao lalao, hihira, handihy sns izahay. Ny tale jeneraly Andriamatoa Chen dia nanao kabary ary nidera ireo mpiara-miasa izay miasa mafy, ary manome bonus ho azy ireo hanohizany ny ezaka amin'ny taona 2020. Hamaky bebe kokoa »
2020, taona iray tena manokana
Fotoam-pahefana: Aog. 19-2020
Taona miavaka ny 2020, fanombohana sarotra tokoa .coVID-19, voarara mandritra ny telo volana ny faritanin'i Hubei, tsy afaka miverina miasa intsony ny antsasaky ny mpiara-miasa amin'i Hubei. Vitsy ny mpiasa miverina amin'ny 1 martsa manomboka miasa amin'ny tsindry mafy. Betsaka ny baiko napetrak'i custo ...Hamaky bebe kokoa »
Aorian'ny fahazoana ny mari-pankasitrahana CE avy amin'ny Intertek sy TUV dia mahazo tatitra momba ny fanandramana vaovao momba ny EN521 izahay. Hamaky bebe kokoa »
FANAMORIANA SAFE IHANY IHANY NO TOKANA MANOMBOKA, TSY MISY FARANY
inona ny pridcution azo antoka: ny prodcution azo antoka dia ny firaisan'ny fiarovana sy ny prodcuton, ary ny tanjony dia ny hampiroboroboana ny famokarana soa aman-tsara, ary ny prodcutionmust dia tokony ho azo antoka. Ny fanaovana asa tsara amin'ny fiarovana sy fanatsarana ny toe-piainana; ny fampihenana ny fatiantoka fananana dia mety hampitombo ny fahombiazan'ny orinasa, ary tsy isalasalana ...Hamaky bebe kokoa »
Hanatrika ny China Hardware Show any Shanghia isika amin'ny 10 ka hatramin'ny 13 Oktobra. Hamaky bebe kokoa »
FAMPANDROSOANA HOLIDAY HO AN'NY DADY NATIONAL AND FESTIVAL MID-AUTUM
Araka ny fandaharam-potoanan'ny fetin'ny firenena, ampiarahina amin'ny toe-javatra misy ny orinasa, dia toy izao ny fandaminana ny fialantsasatra: hisy telo andro miala amin'ny 1 Oktobra 2020 ka hatramin'ny 3 Oktobra. Mandehana miasa amin'ny 4 Okt. Mirary fety sambatra ho anao. Hamaky bebe kokoa »